RWTH Aachen University - Baro Abroad ee Germany
Ha iloobin in aad wada hadlaan RWTH Aachen University
Qorto RWTH Aachen University
Excellence Initiative The oo ka mid ah dowladaha gobolka iyo federaalka Jarmal boost weyn la siiyaa dheeraad ah
horumarinta RWTH Aachen University. istaraatijiyad The hay'adaha on taas oo codsi guul Excellence Initiative waxaa la salaysan leeyahay, in waqtigaas, la ballaariyay si ay u sameeyaan istaraatijiyad muddo dheer ah in la xoojiyo oo dhan meelaha of University iyo kor loogu qaado profiles ay. In geeddi-socodka waxaa helay hawl-wadeeno weyn, taas oo loo arki karaa, iyo waxyaabo kale, ee hawlaha ballaaran dhismaha.
caddaymo muuqda oo ay tani tahay Campus RWTH Aachen ah in la horumariyo in iskaashi dhow la warshadaha iyo taas oo ah in ay sameeyaan mid ka mid ah xarumaha cilmi-baarista ugu weyn ee Europe. Ardayda iyo shaqaalaha RWTH Aachen siman ka faa'iidaysan doona horumarka, kuwaas oo ay si cad martiqaaday in ay ka qayb qaataan qaabeynta dadaallada shaqsi.
The fikrado xiise badan oo hore u leedahay saameyn ku leh gobolka oo dhan ee magaalooyinka of Aachen iyo meesha oo dhan Tri-xadka ah ee Germany, Belgium iyo Netherlands. bulshada aqoonta cusub waxaa isa soo taraysa in ula shebekadaha qaar ka mid ah la-hawlgalayaasha cilmi-baarista iyo warshadaha keentay dunida ee.
RWTH Aachen waa ciidan wadista ugu weyn ee keentay horumarka this. Oo Aachen, iyo sidii magaalo lagu noolaan karo oo jeclaan karo ee laysaan saddex dhaqamada, waxay bixisaa jawi fiican ee habka hal abuur this of horumarinta.
Iyada oo ay 260 machadyada sagaal kulliyadood, RWTH Aachen ka mid ah hay'adaha keentay sayniska iyo cilmi Yurub. 43,721 ardayda 152 koorsooyin waxbarasho ka diiwaan gashan simistarka jiilaalka ah 2015/16, lugu daro 7,904 ardayda caalamiga ah ka 125 dalalka. Baridda at RWTH Aachen waa fulintooda xoogga ugu horrayn waxa weeyi. Sidaa darteed qalin Its waxaa dooneen-ka dib markii madaxda sare sida hoose iyo hoggaamiyayaasha ganacsiga iyo warshadaha.
qiimeynta Qaranka (of) iyo qiimeynta heerka caalami ee la xaqiijin in awoodda wayn ee ka qalin RWTH 'in ay la tacaalaan hawlaha adag, si ay u xaliyaan dhibaatooyinka si wax dhisid ah ee shaqada kooxda iyo in ay qaataan on doorka hogaaminta. Sidaa darteed ma aha la yaab in xubno badan oo guddiga ka mid ah kooxaha shirkadaha Jarmal bartay at RWTH Aachen.
RWTH Aachen ayaa qarka u laftiisa gool si cad loo qeexay. By sanadka 2020, waxay ujeedadiisu tahay inuu noqon University ugu fiican Jarmalka of technology oo ka mid ah shanta kooxood ee ugu sareysa Europe sida lagu qiyaasay saarka tacliimeed, by tayada qalin-, iyo maalgelin dibadeed. Waxay ku dadaaleysaa in ay noqon ciyaaryahan keentay in mashaariic cilmi-maadooyinka oo baaxad weyn. Waxay ujeeddadiisu tahay in ay jaamacadaha caalamku aqoonsan yahay oo la waarta heer sare ah ee cilmi-baarista iyo cilmiga in tababar tacliinta fiican iyo hoggaamiyayaasha dhallinyarada ah iyo sidoo kale-qalma ee warshadaha iyo bulshada ee labada macnaha guud ee qaranka iyo kuwa caalamiga ah.
In this habka xagjirka ah oo adag oo loo jaheeyo, RWTH Aachen isu arkaa sidii jaamacad taas oo kooxaha oo dhan si firfircoon gacan uga dhaqan waarta oo u furan isgaarsiinta. Dhamaan xubno ka mid ah jaamacadda, oo ay ku jiraan ardayda, oo ballan-qaaday in ay taageeraan dhaqan-qabadka sare wadajir ah: tartanka waxaa loo arkaa arrin waxtar nolosha tacliimeed. RWTH Aachen arko dhaqanka hal abuur this isbedelka mabda'a aasaasiga ah ee hal-abuurka iyo horumarka bulshada.
xisaabta, Sayniska Kombiyuutarka iyo Sciences Dabiiciga ah
Georesources iyo Qalabka Engineering
Electrical Engineering iyo Technology Information
Arts oo Humanities
School of Business iyo Dhaqaalaha
On 25 January 1858, amiirka Frederick William of Prussia (boqor Jarmal ka dib), ayaa lagu soo bandhigay iyadoo deeq ka kooban 5,000 talers Zako, kiciyey by und Aachener Münchener Shirkadda Caymiska Fire, maamaan ee shirkadda AachenMünchenerinsurance ah. In March, oo amiir u doortay in ay isticmaalaan deeq si helay machadka ugu horeysay Prussian of technology meel gobolka theRhine. Xarunta hay'adda hadhay go'aan ka sano; halka amiirka hore fadilay Koblenz, magaalooyinka ofAachen, Bonn, Cologne iyo Dusseldorf ayaa sidoo kale codsatay, la Aachen iyo Cologne isagoo ku tartamaya ugu weyn. Aachen ugu dambeyntii ku guuleystay fikradda maalgelinta taageeray by shirkadda caymiska iyo baananka maxalliga ah. Groundbreaking cusub Polytechnikum dhacay 15 Laga yaabaa 1865 iyo muxaadarooyin bilaabay intii lagu jiray Dagaalkii Franco-Prussian ku saabsan 10 October 1870 la 223 ardayda iyo 32 macalimiinta. hay'ad cusub lahaa sida ay ujeedada aasaasiga ah waxbarashada injineerada, gaar ahaan warshadda macdan qodista ee degaanka Ruhr ah; waxaa jiray dugsiyada ee kiimikada, injineernimada korontada iyo farsamo iyo sidoo kale hordhaca ah dugsiga guud in baray mathematicsand dabiiciga ah cilmiga iyo qaar ka mid ah cilmiga bulshada.
booska cadda of Prussian cusub polytechnika (kaas oo si rasmi ah aan ku jiray jaamacadaha) saameeyeen ee sano ee ugu horreeya. Kulliyadaha xirfaddaha u baahnaydeen sharafta bulshada iyo tirada ardayda hoos. Wuxuu bilaabay inuu wax isbedelaan 1880 marka hore RWTH ah, kuwo kale, waxaa habayn sida a Royal Technical University, faa'iiday kursi ee Prussian House of Eebayaal, iyo ugu dambeyntii ku guuleystay xaq u leeyihiin inay ugu nicmeeyo PhD (1898) darajo iyo koobab Diplom (soo bandhigay in 1902). In isla sanadkaas, ka badan 800 ardayda lab ku qoran. In 1909 Haweenka marka hore ayaa la dhigey iyo farshaxanka August von Brandis guulaysteen Alexander Frenz ee Kuliyada Architecture sida a “professor of tirada iyo muuqaalka rinjiyeynta”, Brandis noqday hormuudka in 1929.
Dagaalkii Adduunka, si kastaba ha ahaatee, cadaato dhac halis ah jaamacadda. Arday badan ayaa si iskood ah ku biiray oo ku dhintay dagaalka, iyo qaybo ka mid ah jaamacadda ayaa wax yar ka degan ama lala wareegay.
Inkastoo (ka dibna mar dambe ma boqornimada) TH Aachen (Aachen University) Shafay ee 1920 la hordhaca ah ee kulliyadaha badan oo xor ah, dhowr machadyada cusub oo ka mid ah ardayda guud’ guddiga, calaamadaha ugu horreeya ee xagjirnimada nationalist sidoo kale noqday muuqda gudahood jaamacadda. Reich Saddexaad ee Gleichschaltung of TH ee 1933 la kulmeen iska caabin yar ka ardayda iyo macalimiinta labada. Laga bilaabo September 1933, Yuhuudda iyo (lagu eedeeyay) Professor shuuciga (iyo ka 1937 ardayda ayaa sidoo kale) ayaa si nidaamsan loo silciyo, oo laga saaray jaamacadda. Guddoomiyeyaasha bannaan ayaa sii kordheysa la siiyaa NSDAP xisbiga xubnaha ka ah ama dhacsan. xorriyadda cilmi-baarista iyo waxbarashada noqday ba'an ku koobnayn, iyo machadyada muhiim u ah qorshaha Itobiya ayaa si nidaamsan aasaasay, iyo kuraasta jira dalacsiiyay. Si kooban u xiran yihiin 1939, TH sii koorsooyin 1940, inkastoo tirada yar ee ardayda. On 21 October 1944, marka Aachen casaanka ka, in ka badan 70% dhammaan dhismayaasha jaamacadda ee la burburiyey ama burburay.
Ka dib dagaalkii labaad ee dunida ku dhamaaday 1945 jaamacadda soo kabsaday oo si deg deg ah isku ballaariyeen. In 1950, Professor badan oo laga saaray sababtoo ah eedeeyey raacsan xisbiga Nazi ayaa la oggol yahay inuu ku soo laabto iyo dad badan oo la machadyada cusub ayaa la aasaasay. By dabayaaqadii sannadihii 1960, TH ku lahaa 10,000 ardayda, taas oo ka dhigaysa ugu horreeyey oo dhan jaamacadaha farsamo Jarmal. Iyada oo aasaaskii kulliyadood falsafada iyo caafimaadka ee 1965 iyo 1966, siday u kala horreeyaan, Jaamacada noqday more “universal”. Caqlina cusub ee la aasaasay gaar bilaabay soo jiitay ardayda cusub, iyo tirada ardayda labanlaab laba jeer ka 1970 (10,000) si ay u 1980 (in ka badan 25,000) iyo ka 1980 si ay u 1990 (in ka badan 37,000). Hadda, tirada celcelis ahaan ardayda ku wareegsan yahay 42,000, ku saabsan mid ka mid saddexaad ee ardayda oo dhan in ay haweenka. By la eego qaraabo, waxbarasho-barnaamijyada ugu caansan yihiin injineernimada (57%), sayniska dabiiciga ah (23%), dhaqaalaha iyo culuumta (13%) iyo daawada (7%).
Bishii December 2006, RWTH Aachen iyo Cumaan heshiis in la dhiso a University gaarka ah Jarmal of Technology ee Muscat saxiixay. Professors ka Aachen laayo horumarinta manaahijta ee haatan shan waxbarasho-barnaamijyada iyo shaqaalaha cilmiyeed la wareegay qaar ka mid ah kooxihii ugu horeeyay.
In 2007, RWTH Aachen loo doortay mid ka mid ah sagaal Jaamacadaha Jarmal of Excellence for ay fikradda mustaqbalka distended 2020: Kulan Global Caqabadaha, waxay kasban xidhiidh ah inay noqoto mid ah jaamacadda aqoonyahanada. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo liiska jaamacadaha u sharrifnay Binii for fikradaha ay mustaqbalka inta badan ka kooban yahay hay'adaha waaweyn iyo hore u ixtiraamo, Wasaaradda Federaalka ah ee Waxbarashada iyo Cilmi-baarista ayaa sheegay in hindisaha hiigsado kor jaamacadaha la fikradda ah mustaqbalka heegan ah si ay u sii wadi karo cilmi baarista level.Having caalami ah ku guuleystay lacag dhan in saddex ka mid ah maalgelinta, habka keenay RWTH Aachen University ah maalgelin dheeraad ah oo total of € 180 million ka 2007-2011. The kale laba xadhig maaliyad ahaayeen dugsiyada graduate, halkaas oo Aachen Institute for Study Advanced in xisaabeed Engineering Science helay kaalmo iyo waxa loogu yeero “rucubood oo heer sare ah”, halkaas oo RWTH Aachen u suurtagashay in ay ku guuleysato maalgelinta saddexda rucubood: Ultra High-Speed ​​Mobile Warfaafinta iyo Isgaarsiinta (UMIC), Technology Production dhamaystiran ee dalalka High-mushaharka iyo Shidaalka Dawaarka-Made ka dabdhaliyayaasha
Ma rabtaa wada hadlaan RWTH Aachen University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: RWTH Aachen University rasmiga ah Facebook
dib u eegista RWTH Aachen University
Ku biir si ay ugala hadlaan of RWTH Aachen University.